Banyere Anyị - Shandong Longhua New Materials Co., Ltd.
Mgbanwe polyether polyol
Polyether polyol na-agbanwe agbanwe dị elu
Ihe atụ nke polyether polyol
Polymer polyol dị elu
Shandong Longhua Ụlọ ọrụ New Materials Co., Ltd.
bụ ọkachamara polyether polyol emeputa kemgbe Machị 2011. Ọ dị na Nọmba 289 Weigao, Gaoqing Economic Development Zone, Zibo City, Shandong Province, China. Isi ngwaahịa ya bụ polyether polyol, polymer polyol nke enwere ike itinye ya na ụfụfụ na -agbanwe agbanwe, oche ụgbọ ala, mkpuchi, nrapado, sealant na elastomer. Ike imepụta bụ tọn metric 360,000 kwa afọ.
Polymer polyol bụ ngwaahịa kacha ere ahịa nke ụlọ ọrụ, Longhua ji aka ya mepụta teknụzụ nrụpụta nke ngwaahịa a, ogo ngwaahịa a erutela ọkwa teknụzụ dị elu n'ụwa. VOC dị ala, nnukwu agba ọcha na viscosity dị ala. Ya mere, ngwaahịa a abụghị naanị ewu ewu na ahịa ụlọ China kamakwa na mba ofesi ma ndị ahịa na -enyocha ya nke ukwuu. Mmepụta polyol polyhua nke Longhua nọ n'isi ụlọ ọrụ ndị yiri ya na China. Site na afọ 2021, polyether polyol nwere ngwa CASE ga -abụ otu n'ime usoro ngwaahịa asọmpi ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Longhua enwetala asambodo ISO 9 0 0 1, 1 4 0 0 1 na 4 5 0 0 1. Ma na -ebuga ibu ibu n'ụwa niile dịka America, South America, South East Asia, Middle East, Africa na Europe. Longhua bụ ụlọ ọrụ na -eto ngwa ngwa. Ọ hiwere ngalaba Qingdao na Shanghai ma nabata ndị enyi si n'akụkụ ụwa niile ka ha bịa leta ma kwurịta okwu.
Banyere Akụkọ Longhua
Na 2018, ụlọ ọrụ ọhụrụ etinyere na mmepụta polyether mmepụta akara gosipụtara uru ya na teknụzụ nhazi, ịdị mma ngwaahịa, njikwa ọnụ ahịa, wdg, na ire ụlọ na mba ofesi gara n'ihu na-abawanye nke ukwuu.
Ka ọ na -erule ngwụsị afọ 2019, ngụkọta akụ nke ụlọ ọrụ ahụ nke $ 114 nde US, akụ net nke dollar US $ 100, yana ego ahịa nke US dollar 350 kwa afọ, mmepụta polymer polyol nke ụlọ ọrụ na olu ire ahịa nọ n'etiti ndị kachasị na mba ahụ.
Linelọ ọrụ mmepụta polyether dị elu nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ngwaọrụ mmepụta nwere ikike ikike ọgụgụ isi nwere onwe ya kpamkpam. Ngwaọrụ na -anabata ụzọ usoro mmepụta ihe na -aga n'ihu. A na -akwalite arụmọrụ nke ọma nke ukwuu, ọnụ ahịa nrụpụta dị ala karịa nke ngwaọrụ ochie, a na -emezi ọnụego mgbanwe monomer, ịdị mma ngwaahịa a kwụsiri ike, yana monomer dị ala. Njirimara ihe fọdụrụ, isi dị ala, VOC dị ala na viscosity dị ala. N'otu oge ahụ, ọrụ nke ngwaọrụ a bụ obere carbon na gburugburu ebe obibi, ọ nweghịkwa ihe mkpofu atọ. Teknụzụ usoro igodo adịghị mkpa iwepu usoro nnyefe yinye iji mepụta POP bụ nke mbụ na China, na -ejupụta oghere ụlọ, ndepụta ngwaahịa dị n'ọkwa dị elu na ụlọ ọrụ ahụ, ọ nwere ike ịsọ mpi na ngwaahịa si mba ọzọ yiri ya. Etupụtara ya dịka 2018 Shandong Enterprise Brand Innovation site na Association Nnwale Ogo Shandong. Nsonaazụ dị mma na -akwalite ọganihu nke polyols anụ ụlọ.
Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso ụkpụrụ ụlọ ọrụ nke "dabere na iguzosi ike n'ezi ihe, imekọ ihe ọnụ na-emeri", na-akwado mmụọ nke "nlanarị nke ịdị mma, njikwa sayensị maka uru, imekọ ihe ọnụ iji gbasaa ahịa, teknụzụ ọhụrụ na mmepe". , ma na -agbaso "ogo ngwaahịa kwụsiri ike, afọ ojuju ndị ahịa chọrọ, nkwalite ụlọ ọrụ na -aga n'ihu, yana ụkpụrụ ịdị mma nke imepụta uru ka mma, yana mmejuputa echiche azụmaahịa nke" Ịhapụ ndị ọrụ na inye ndị ahịa uru ". N'ọdịnihu, ụlọ ọrụ ahụ ga -aga n'ihu na -aga n'ihu n'okporo ụzọ nke imepụta ngwaahịa na ịkọwapụta usoro okirikiri ụlọ ọrụ, wee gbalịsie ike iji nwayọọ nwayọọ ghọọ ụlọ ọrụ mmepụta polyether polyol (PPG) na polymer polyol (POP) na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. , Mepụta akara ama ama n'ụwa niile.
SHANDONG LONGHUA NEW MATERIAL CO., LTD. dị na Nọmba 289 Weigao Road, Gaoqing Economic Development Zone, Zibo City, Shandong Province, China. Isi ngwaahịa ya bụ polyether polyol, polymer polyol nke enwere ike itinye ya na ụfụfụ na -agbanwe agbanwe, oche ụgbọ ala, mkpuchi, nrapado, sealant na elastomer.
Isi nhazi ọkwa
Polymeric polyol dị elu
Adreesị ụlọ ọrụ (HQ): 289 Gaogao Road, Gaoqing County, Zibo City, Shandong Province, China
Adreesị Alaka Qingdao: 50/F China Resources Building A, Qingdao City, Shandong, China
Adreesị Alaka Shanghai: RM 2309, Oriental Financial Plaza, Century Avenue, Pudong New Mpaghara, Shanghai, PRChina